Unyango lwe-PSA Oxygen kunye neNitrogen yeZityalo | Icandelo lokwahlulahlula umoya -Izixhobo zeJenereyitha yeoksijini
IZIXHOBO ZOKWAHLULA EMOYENI
Izibonelelo zeMveliso 1: Isixhobo sokushicilela seRotary esiZenzekelayo. 2: Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi kakhulu. 3: Ukugcina amanzi njengesiguquli somoya kupholile. I-4: I-100% yentsimbi yokwakha i-stainless steel ngokwe-ASME imigangatho I-5: Ucoceko oluphezulu lwe-Oxygen yokusetyenziswa kwezonyango / esibhedlele. I-6: I-Skid ekhwele ingxelo (Akukho siseko siyifunayo) 7: Ukuqala ngokukhawuleza kunye nokucima ixesha. 8: Ukuzalisa ioksijini kwisilinda ngempompo yeoksijini engamanzi Isicelo seMichiza iOxygen, nitrogen, argon kunye nenye igesi enqabileyo evelisiweyo ...
Izinto eziluncedo zeMveliso 1.Ukufakwa ngokulula kunye nokugcina umbulelo kuyilo lweemodyuli kunye nolwakhiwo. Inkqubo ye-2.Fully automated yokusebenza elula nethembekileyo. 3.Ukufumaneka okuqinisekisiweyo kweegesi zorhwebo ezisulungekileyo. I-4 iqinisekisiwe ngokufumaneka kwemveliso kwinqanaba lolwelo ukuba ligcinwe ukuze lisetyenziswe ngalo lonke ixesha lolondolozo. Ukusetyenziswa kwamandla 5.Low. Ukuhanjiswa kwexesha 6. Fields Isicelo Oxygen, nitrogen, argon kunye nezinye irhasi ezinqabileyo eziveliswa iyunithi yokwahlula umoya ...
Izinto eziluncedo zeMveliso Sakha isityalo seoksijini sokuzalisa iisilinda ngezinto ezifanelekileyo kunye namacandelo. Silungiselela izityalo ngokweemfuno zabathengi kunye neemeko zasekhaya. Sivelile kwimarike yegesi esinikezela ngayo eyona indibaniselwano indleko kunye nokusebenza kakuhle kweenkqubo zethu. Ukuzenzekelayo ngokuzenzekelayo, izityalo zingasebenza zingagcinwanga kwaye zinokukwenza ukuxazulula ingxaki ekude. Precision ukuyila kwandisa ukusebenza kwaye kwehlisa ukusetyenziswa kwamandla ngaloo ukugcina sig ...
Izinto eziluncedo zeMveliso Siyaziwa ngobuchule bethu bobunjineli obuhle kakhulu ekuyileni izityalo zeoksijini ezingamanzi ezisekwe kwitekhnoloji ye-distillation ye-cryogenic. Ukuyila ngokuchanekileyo kwenza ukuba iinkqubo zethu zerhasi zithembeke kwaye zisebenze kakuhle zikhokelela kwiindleko zokusebenza eziphantsi. Eveliswa ngezinto ezikumgangatho ophezulu kunye namacandelo, izityalo zethu ezingamanzi ioksijini zihlala ixesha elide kakhulu zifuna ukugcinwa okuncinci. Ukuthotyelwa kwethu ngamanyathelo olawulo olungqongqo, thina h ...
Izinto eziluncedo zeMveliso 1.Ukufakwa ngokulula kunye nokugcina umbulelo kuyilo lweemodyuli kunye nolwakhiwo. Inkqubo ye-2.Fully automated yokusebenza elula nethembekileyo. 3.Ukufumaneka okuqinisekisiweyo kweegesi zorhwebo ezisulungekileyo. I-4 iqinisekisiwe ngokufumaneka kwemveliso kwinqanaba lolwelo ukuba ligcinwe ukuze lisetyenziswe ngalo lonke ixesha lolondolozo. Ukusetyenziswa kwamandla 5.Low. Ukuhanjiswa kwexesha 6. Amacandelo okuSebenza i-Oxygen, i-nitrogen, i-argon kunye nezinye igesi ezinqabileyo eziveliswa ngokwahlukana komoya ...
Izibonelelo zeMveliso 1: Umgaqo woyilo wale sityalo kukuqinisekisa ukhuseleko, ukonga umbane kunye nokusebenza ngokulula kunye nokugcinwa. Itekhnoloji yindawo ekhokelayo kwihlabathi. A: Umthengi ufuna uninzi lwemveliso engamanzi, ke sinikezela ngenkqubo yokuphinda usebenzise umoya kwakhona ukuze ugcine ukonga kunye nokusetyenziswa kwamandla. B: Sisebenzisa kwakhona isiguquli somoya kunye nokuhenda okuphezulu, okuphantsi. Inkqubo yolwandiso ukugcina ukusetyenziswa kwamandla. 2: Yamkela ulawulo lwekhompyuter yeDCS ...
Izinto eziluncedo zeMveliso Sithatha iindlela ezahlukeneyo zokupakisha ngokweemfuno ezithile. Iingxowa ezisongelweyo kunye neebhokisi zomthi zihlala zisetyenziselwa ukungangeni manzi, ukungqina uthuli kunye neenjongo zokutshutshisa, ukuqinisekisa ukuba zonke izixhobo zihlala zikwimeko efanelekileyo emva kokubeleka. Ngokwempahla yokusebenza, inkampani inendawo yokugcina enkulu kunye nenqwelomoya eyingqayizivele yabanini bamashishini ayi-800. Sinokuhambisa iitoni ezingama-500 zeemithwalo ezigqithileyo ngqo kumjelo kwizibuko laseShanghai. Sinezinto ezininzi ...
Ukucaciswa kwemveliso (Nm³ / h) Ukusetyenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) inkqubo yokucoca umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Senza kwaye sithumela ngaphandle isityalo seoksijini esizenzekelayo kunye nenitrogen Utyalo lokugcwalisa isilinda kunye ne-cryogenic distillatio yamva nje ...
Ukucaciswa kwemveliso (Nm³ / h) Ukusetyenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) inkqubo yokucoca umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Ioksijini yirhasi ebalulekileyo ekuxhaseni ubomi kwi Umhlaba, okhethekileyo esibhedlele, ioksijini yezonyango idlala indima ebaluleke kakhulu ...
Ukucaciswa kwemveliso (Nm³ / h) Ukusetyenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) inkqubo yokucoca umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Senza isityalo se-PSA sisebenzisa i-PSA yamva nje ( Uxinzelelo lwe-Swing Adsorption) kwitekhnoloji. Ukuba phambili PSA izityalo oxygen manu ...
Ukucaciswa kwemveliso (Nm³ / h) Ukusetyenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) inkqubo yokucoca umoya i-ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 1: Iphepha kunye nePulp mveliso yeOxy bleaching kunye ulungelelwaniso 2: Amashishini eglasi ukutyebisa iziko 3: uMenzi wentsimbi ...
Ukucaciswa kwemveliso (Nm³ / h) Ukusetyenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) Inkqubo yokucoceka komoya I-ORN-5A 5 0.76 KJ-1 DN25 DN15 ORN-10A 10 1.73 KJ-2 DN25 DN15 ORN-20A 20 3.5 KJ-6 DN40 DN15 I-ORN-30A 30 5.3 KJ-6 DN40 DN25 ORN-40A 40 7 KJ-10 DN50 DN25 ORN-50A 50 8.6 KJ-10 DN50 DN25 ORN-60A 60 10.4 KJ-12 DN50 DN32 ORN-80A 80 13.7 KJ-20 DN65 DN40 I-ORN-100A 100 17.5 ...